Avelao hamirapiratra ny kintana rock | Martech Zone
Alahady, Desambra 4, 2011 Douglas Karr
Duke Long mihazakazaka a bilaogy momba ny trano sy tany ara-barotra ary vao haingana no nanadinadina ahy tamin'ny seho nataony tamin'ny alàlan'ny Google+ Hangout. Zava-dehibe ny lohahevitra… ao amin'ny indostria izay matetika ny mpitondra dia mifehy, manisa ary… angamba… miaraka amin'ny egos sasany, ahoana no hataonao fanaraha-maso ny hafatra?
Raha tsorina, ianao fanaraha-maso ny hafatra amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo olona marina ary avelao izy ireo hanao izay tiany. Amin'ny fananan-tany ara-barotra, ny fahefan'ny indostria sy ny fifandraisana eo amin'ny orinasa novolavolain'ny agents dia lakilen'ny fahombiazany. Ny fanitarana an'ity tambajotra ity amin'ny asa sosialy dia filàna tanteraka. Avelao hamirapiratra ny kintana vatolampy!
Ity ny resaka… miaraka amina blipsy mba hahazoana antoka fa tsy tafintohina isika:
Manahy ny orinasa fa raha hitan'ny mpiasa ho kintana rock ny mpiasa iray dia miala amin'ny fanaraha-maso izy ireo. Hevero, ianao foana miala amin'ny fifehezana. Fantatry ny mpanjifa fa tonga sy mandeha ny olona… indrindra ireo manan-talenta. Raha manahy ianao sao hiala ny kintanao rock ary hitondra azy ireo ny tambajotra dia ataovy izay ilainao tehirizo ireo. Fa raha mandeha izy ireo dia handeha izy ireo na avelanao hanana kaonty twitter izy ireo na tsia.
Ny fotoana ahazoana tombony sy hitombo amin'ny famelana ireo kintana rock hamiratra amin'ny media sosialy mihoatra ny fametrahana ny mpiasanao ao anaty tranom-borona izay ahatsapany fa tsy voafehin'izy ireo na manana fotoana mety. Izany, miaraka amin'ny fahaverezan'ny fanavaozana, ny serasera ary ny orinasa azon'izy ireo alaina avy amin'ny media sosialy dia fomba iray fandrahoana loza.
Tags: fahefanatrano fivarotanavarotra sy hofa fananana mifakakintana rock
Ny onja ecommerce tsy azo sakanana